Venezoela: Ao Anatin’ny Sanganasan’Ilay Mpanakanto Jesus Soto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2018 10:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, বাংলা, Swahili, 繁體中文, 简体中文, English
(Marihina fa tamin'ny 5 Novambra 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Anisan'ireo sanganasa malaza indrindra mampiseho ny zavakanto maoderina Latino-Amerikana, fantatra indrindra tamin'ny zavakanto mampihetsi-po ny sanganasan'ilay mpanakanto Venezoeliana Jesús Soto (1923-2005). Teraka tao Ciudad Bolívar, Venezoela, i Soto, izay nanombohany niasa ho mpanao sary hosodokon'ny sarimihetsika. Nianatra tany Caracas, Maracaibo izy, saingy tao Paris no niainga (namokatra) ny asany. Ny « pénétrables », sary sokitra vita amin'ny fantsona plastika miloko, efajoro sy manify, mihantona, izay azon'ny olona andalovana no sanganasany tena nalaza indrindra.
Sarin'ny ankizy iray tao amin'ny fampirantian'i Soto. Sary avy amin'i Alé, nampiasana lisansa Creative Commons.
Araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana, tsy misaraka amin'ny mpijery izay mandray anjara mavitrika ao anatin'izany ny sanganasan'i Soto. Raha ny marina, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny teknika mifandraika amin'ny alonalom-pijerena no hamenoan'i Soto ny fahatsapan'ireo mpijery izay tafiditra ao anatin'ny sanganasany azo tsapai-tanana. Nankalaza ilay mpanankanto ao anatin'ny lahatsoratr'izy ireo, sy ny fanadihadiana ary ny lahatsary izay nalaina tao anatin'ny mozea sy tao anatin'ireo sanganasa mihitsy aza ireo bilaogera Venezoeliana sy ny vondrom-piarahamonina antserasera amin'ny ankapobeny, amin'ny fanazavana momba ny tiany ho lazaina mikasika ny kolontsainy, ny tontolo iainany ary ny fiainany andavanandro.
Ao anatin'ny bilaoginy Literanova, nolazain'i Eduardo Casanova tamin'ny antsipiriany bebe kokoa ny fiainan'i Soto sy ny fahitany ny tanàndehibe izay nahaterahan'ilay mpanankanto:
Teraka tany Venezoela tamin'ny taona 1923 tao Ciudad Bolívar, tanandehibe iray nanan-tantara maro izay nahaterahan'ny gazety an-tsoratra nasionaly ary niorina tao Grande Colombie (…)i Jesús Rafael Soto. Tanàndehibe iray nitoka-monina izy io, sady tsy nahitana mozea no tsy nanana hetsika ara-javakanto. Izy ihany koa no nilaza fa tsy nianatra afatsy sary hosodoko izy tao an-toerana. Niala tao an-tanàndehibe nahaterahany izy ary nonina tany Maracaibo, any andrefan'ny firenena, izay nitantanany ny sekoly ho an'ny zavakanto plastika. Tamin'ny taona 1950, nankany Paris izy ary nanomboka ny asany ho mpananankato mpamorona amin'ny endrika zavakanto vaovao.
Sarin'ny faribolana nataon'i Soto tao Caracas. Sary: Ramos Flamerich, sary nampiasana lisansa GNU.
Nampiseho ohatra iray momba ny zavatra niainan'ny mpijery izay nandalo ny sanganasa iray nandritra ny fampirantiana tao amin'ny mozea Jesús Soto tany Ciudad Bolivar ny fantsona YouTube VenezuelaTuya:
Manana habaka iray natokana hiadiankevitra momba ity mpanakanto ity sy ny sanganasany malaza indrindra ihany koa ny bilaogy Talento Venezolano :
Tamin'ny taona 1967 no namoronan'i Soto ny sanganasa voalohany tamin'ny « Pénétrables », vita tamin'ny fantsona plastika nahafahan'ny mpijery nahatsapa ny tao anatin'ny toerana mahatalanjona. Nampirantiana tao amin'ny Mozean'ny Zavakanto Maoderina, tao amin'ny Grand Palais sy tao amin'ny Centre Pompidou tany Paris ireo sanganasa roa ireo .
Afaka mizara ny fihetseham-pony ao amin'ny YouTube ireo mpijery amin'ny miatrika ny sanganasan'i Soto. Ireo ankizy, indrindra indrindra, no tena mahatsapa manokana ny traikefa ara-javakanto ao anatin'izany sanganasa izany, toy ny hita ato anatin'ireto lahatsary ireto.
Avy amin'ny mpisera elizaul1:
Avy amin'ny mpisera skaracas:
Manasongadina ny andian-tsary sy ny fanazavana amin'ny antsipiriany ny pejin'ny tranonkalan'ilay mpanankato .